ဟေး…. မြူးမြူးတူးတူး GrabRewards ဗုဒ္ဓဟူးပါ။| Grab MM
ဟေး…. မြူးမြူးတူးတူး GrabRewards ဗုဒ္ဓဟူးပါ။
ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှ စပြီး GrabRewards အပတ်စဉ် အထူးအစီအစဉ်တွေ စတင်ပါပြီ။
အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာ (၂၄ နာရီ) အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ အရေအတွက် အကန့်အသတ်တော့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ လတိုင်း ပထမပတ်မှာ အထူးဆု အသစ် တစ်ခုရှိမှာပါ။ ပါဝင်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ မဲလက်မှတ် တစ်ကြိမ် ဝယ်ယူမှုတိုင်းက GrabRewards ပွိုင့် ၁၀ နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ကံထူးနိုင်ကြပါစေ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း GrabRewards ကို အလည်လာပြီး အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်တွေမှာ ပထမဆုံး ရရှိပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်နိုင်ပါစေ။
၁။ အခုပြိုင်ပွဲဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း Grab သုံးစွဲသူ မည်သူမဆို ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ Purchased စာ ပေါ်လာပါမှသာ ဝယ်ယူမှု အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပြိုင်ပွဲကာလပြီးဆုံးပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်းမှာ ဆုရှင်တွေကို Grab Facebook စာမျက်နှာမှာ ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပြီး Grab ဘက်ကလည်း ဆုရှင်တစ်ယောက်ချင်းစီကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကြေညာထားသော အစီအစဉ်အတိုင်း အနိုင်ရရှိသူကို ကျပန်း သတ်မှတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝယ်ယူမှုအများဆုံးဖြင့် သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Grab အပလီကေးရှင်းအတွင်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မှာ အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၆။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက Grab တာဝန်ရှိသူများရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကသာ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Grab (Myanmar) Limited က စီစဉ်ပေးအပ်ထားတဲ့ ပရိုမိုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပြီး Grab (Myanmar) Limited ရဲ့ မည်သည့်ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားမဆို အသုံးပြုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
၈။ အနိုင်ရရှိသူသည် ယခင် Grab ၏ မားကတ်တင်း ပြိုင်ပွဲများတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးသူ မဖြစ်ရပါ။ အကယ်၍ ဆုရှင်မှာ ယခင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးပါက အခြားဆုရှင် တစ်ဦးကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ပြိုင်ပွဲမှာ သရေကျနေပါက GrabRewards များကို အရင်ဆုံး ပွိုင့်နဲ့လဲလှယ်ခဲ့သူကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်လိုက်တာဟာ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး သဘောတူလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို Grab ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုင်ရာပေါ်လစီနဲ့အညီ အသုံးပြုဖို့ လက်ခံခွင့်ပြုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တရားဝင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လက်ခံသဘောတူတယ်လို့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။
၁၂။ ဆုက လွဲပြီး အခြားအပိုကုန်ကျစရိတ်တွေကို Grab က တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၄။ ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ရာမှာ ဒါမှမဟုတ် ဆုကို လက်ခံရယူရာမှာ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သင် ခံစားတွေ့ကြုံရတဲ့ ထိခိုက်မှု ၊ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမှု စတဲ့ အမှုအရာတွေအပေါ် Grab က တာဝန်မရှိကြောင်း သဘောတူရမှာပါ။